Ungayikhetha Kanjani Indawo Yomshado Ophelele - Ukuhlela Nezeluleko
Ungayikhetha Kanjani Indawo Yomshado Ophelele
Yize kunezinto eziningi umuntu okudingeka azicabangele, kusuka kokugqokile, ukuthi hlobo luni lokudla okufanele abe nalo, imihlobiso ongayikhetha nesinye sezici ezibaluleke kakhulu… Kungcono ukuqala ukuhlela kwakho komshado ngokukhetha indawo nokuvimba usuku lapho izindawo zingagcwala maduze futhi izinqumo eziningana - ukupheka, ukuhlobisa, usayizi wohlu lwezivakashi, njll - kuncike esikhaleni onaso. Ngokushesha nje lapho usuku lomshado noma inyanga isiqediwe, umuntu kufanele afune ukubekisa indawo yakhe okungenani izinyanga ezinhlanu kuya kweziyisithupha ngaphambili. Ochwepheshe bezomshado abavela kwi-WeddingWire India bazisa ukuthi ukukhetha indawo 'efanele' kungaba inqubo ethatha izinsuku ekugcineni, futhi ingaba nzima futhi ibe nzima. Ngakho-ke ukwenza kube lula ukukhetha indawo efanele, basikisela izinyathelo ezingezansi okufanele zilandelwe.
Hlela Ibhajethi Yakho
Ukuba nesabelomali engqondweni lapho uhlelela umshado wakho kuyiphuzu elibalulekile okufanele ulikhumbule. Lokhu kuzosusa izinketho ezingenakwenzeka, hlala ngaphakathi kokungenzeka futhi ngokulandelana, konge isikhathi esiningi.
Ukwazi Umbono Wakho
Ukuhlela nokucabanga ngosuku lwakho lomshado kuyisinyathelo sokuqala sokwenza ukukhetha okulungile. Ukuqala, zibuze le mibuzo…
• Ungathanda ukushadelwa endaweni enjani?
• Ingabe kukhona isihloko esithile somshado onaso engqondweni?
• Ungathanda ukuhlelwa ngaphandle noma ngaphakathi kuye ngokuthi ufuna ukushada nini?
• Bangaki abantu abazoba khona emshadweni?
• Ingabe iyatholakala indawo yezivakashi zakho nabathengisi?
• Ingabe indawo oyikhethayo iyakwazi ukunikeza isenzo esisheshayo uma kunezinkinga zomzuzu wokugcina?
Lapho usunezimpendulo zale mibuzo, uzokwazi-ke ukubeka kuhlu izindawo ngokuya ngendawo, uhlobo lwendawo edingekayo, isabelomali, namandla azolingana nomthethosivivinywa.
Hlola Nge-Planner Yakho Yomshado
Ukuhlela umcimbi onzima njengomshado, ngaso sonke isikhathi kuhle ukuba nombono wochwepheshe. Abahleli bomshado bazokusiza ukukunikeza izeluleko ezizokusiza ukufeza umbono wakho, u-ayina imininingwane futhi uphakamise umshado ukuze wakhe isipiliyoni esiyingqayizivele sezivakashi nabazoba weds. Umhleli wakho ekugcineni uzokwazi ukuthi indawo kufanelekile yini ukubona nokwenza kwakho.
Ukuqonda Izivakashi Zakho
Ukwazi ukuthi zingaki izivakashi ongazifuna emshadweni kuzokusindisa ekuqhamukeleni ikhanda phansi komgwaqo. Ngaphambi kokuqhubekela phambili ngamalungiselelo, kuhlale kuyisilinganiso esihle sokwenza uhlu lwezimemo usebenzisa amathuluzi ahlukahlukene aku-inthanethi ukwazi ukuthi zingaki izivakashi ezizobe zikhona endaweni, ukuphatha imininingwane yomcimbi futhi uma iningi lezivakashi lisondele noma kuzofanele ukuhamba ngomshado. Lokhu kuzosiza ekucwengisiseni ukukhetha kwakho indawo.
Bheka Amaphakheji Akhona
Uma ungenaye umhleli womshado wokuqasha abathengisi abaningi noma ukuhlela usuku lwakho olukhethekile, kuhle ukuthi ubheke izindawo ezinikezela ngamaphakeji angeziwe njengokudla, ukuhlobisa, indawo yokuhlala, njll. Lokhu ngeke nje konge isikhathi nemali kepha kuzosiza nase ukuphatha kangcono izinto ezihlukile ngosuku lwakho lomshado.
Qonda ama-FAQ kanye nama-T & Cs
Ngaphambi kokubheka phansi indawo yakho, sincoma ukuthi udabule ama-FAQ endawo ngayinye futhi ubuze imibuzo eminingi ngangokunokwenzeka ukukusiza wenze ukukhetha okuzethembayo. Ngaphambi kokuphothula indawo, ukukhokha idiphozi nokusayina inkontileka, kungakuhle ukuthi uhlole izithombe namavidiyo wesethingi, ufunde ukubuyekezwa kwabathengi nemibandela nemibandela ukuthola umuzwa weziqinisekiso zomuntu siqu, izigaba zokukhansela, imali ebekiwe, njll.
Funda futhi: Amathrendi Omshado Ka-2021 Odinga Ukwazi
amakhambi asekhaya omdanso nezinwele
ungasindisa kanjani ukuwa kwezinwele
isitayela esifushane sokusika izinwele sowesifazane
indlela yokwenza izimpande zezinwele ngamakhambi aqinile ekhaya